Qorshaha dowladda Kenya ay ka leedahay tallaabadii ka careysiisay DF ee ay qaaday - Caasimada Online
Home Warar Qorshaha dowladda Kenya ay ka leedahay tallaabadii ka careysiisay DF ee ay...
Qorshaha dowladda Kenya ay ka leedahay tallaabadii ka careysiisay DF ee ay qaaday
1- Kenya waxay ka faa’iidsataa maalgelin Soomaalida oo la egg wax ka badan 6 bilyan doolar. Waxaa kaloo soo gala xawaalooyin loo soo diro Soomaalida ku nool dalkeeda oo aan ka yarayn hal bilyan oo doolar sannadkiiba.
2- Waxaa dalkeeda xafiisyo ku leh inta dowlad ama hay’adood oo kaalmo iyo deeq u wada Soomaaliya, maaddaama Kenya lagu tiriyo dal aamin ah.
3- Kenya waxay noqotay xuddunta ganacsiga iyo albaabka safarka ka soo galo Soomaaliya (Hub) oo badanaaba ay u adeegsato inay ku baaddo Soomaalida iyo Soomaaliyaba iyadoo u muujiso inay dalkeeda u baahan yihiin.
4- Kenya waxay ka faa’iidsataa shaqaalaha khubarada ah iyo barayaasha ka hawlgala Soomaaliya oo ka yimaadda dalkeeda.
5- Kenya waxay u dhoofisaa Soomaaliya qaadka oo ay ku xiran tahay nolosha beeralay fara badan oo ku nool dakhliga kasoo gala qaadka. Waxay kaloo u dhoofisaa badeecooyin kale oo dalka kasoo baxa iyo kuwa dalal shisheeye uga yimaadda oo ay dib ugu sii dhoofiso Soomaaliya oo suuq u ah.
6- Kenya waxay ka kalluumaysataa badda Soomaaliya idan la’aan.
Faalladan waxay markii hore kusoo baxday Jamhuriyadda.com